10 Meelaha Ugu Badan Ee Epic Surf Ee Yurub | Save A tareenka
Home > Safarka Iceland > 10 Meelaha Ugu Badan Ee Epic Surf Ee Yurub
Xeebaha Sandy, aragtida buurta, biyo buluug ah oo saafi ah, iyo bulshooyinka duufaanka cajiibka ah, Kuwani waa 1o inta badan meelaha loo dalxiis tago ee ku yaal Yurub waxay ku habboon yihiin xannaaneeyayaasha heerarka oo dhan. Xeebaha Talyaaniga ilaa Danmark fog, iyo Boortaqiiska, here are the top beaches for surfing in all of Europe.
1. Xeebta Godrevy, England
Markuu waqtigu sax yahay, waxaad ku dhex raaci kartaa qaar ka mid ah darbiyada dhaadheer ee dheeriga ah iyo xuquuqda halkan. Haa, Xeebta Godrevy ee ku teedsan badweynta Atlantik waa mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee ugu badan Yurub. Waxay ku taal Cornwell, mid ka mid ah magaalooyinka ugu soo jiidashada badan xeebaha Yurub, xeebtaan ayaa ah mid sifiican looga jecelyahay bulshada dhexdeeda.
Xeebta Godrevy waxay ka mid tahay St Ives Bay, iyo xagaaga, waxaad ka heli doontaa halkan dad badan oo deegaanka ah oo iyaga ku saabsan fasaxa xagaaga. Badanaa qoraxda, dhisme qalcado qorraxda, ama aad u bogi laydhka, iyada oo aan ogayn in Godrevy uu bixiyo qaar ka mid ah baraha ugu fiican Yurub.
Goorma: guga, Abriil hirarka nadiifka ah.
2. Meelaha Ugu Badan Ee Epic Surf Ee Yurub: Peniche Portugal
Saacad ka socota garoonka diyaaradaha Lisbon, meesha labaad ee ugubadan ee Yurub ugu xiisaha badan ayaa adiga kugu sugeysa Boortaqiiska. Peniche dhab ahaantii waa jasiirad ku taal xeebta Portugal, taas oo u abuureysa xaalado aad u wanaagsan hirarka halyeeyga sanadka oo dhan. Waxaa intaa dheer, Xeebaha Portugal waa qaar ka mid ah xeebaha ugu riyood badan ee Yurub.
Jebinta barta xiisaha leh, Xeebaha ciida, marka lagu daro xeebaha dhaadheer ee cajiibka ah, samayso Peniche samada fuula. Halka Peniche ay tahay jasiirad, waxaa jira in ka badan 30 baraha lagu fuulo xeebteeda, iyo meelo badan oo kireysiga qalabka lagu rakibo. Hal shay oo maskaxda lagu hayo ayaa ah inaad u baahan tahay suudh qoyan sanadka oo dhan, heerkulka biyaha qabow awgood.
Goorma: Sebtember ilaa Oktoobar
Halkee: Foz do Arelho waa dhul ballaadhan oo ballaadhan oo ciid ah waqooyiga Peniche bilowga iyo faa iidooyinka, mahadsanid helitaanka safka. Xeebta buluuga ah ee loo yaqaan 'Supertubos' waa meesha aad fuuli doontid mowjadda ugu caansan Yurub, dhakhso badan oo xanaaq badan. Sidaas, inaad tahay khubaro khibrad leh mooyee, mawjaddan ayaa si adag hoos kuu dhigi doonta.
Mowjad: 80 cm ilaa 2.6 m.
Xeebaha quruxda badan ee adduunka, oo leh muuqaalo qurux badan iyo xeebo si aad u socoto, Gobolka Donegal waa mid ka mid ah gobollada ugu bilicda badan Ireland. Magaalada Bundoran ee Ireland waxay leedahay mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu fuulo Yurub gudaheeda ee loogu talagalay sahamiyaha heer sare.
Bundoran is home to the most famous waves, ugu sareeya. Fiinta sare waa bidix qumman, ka xoog badan oo ka gaaban. Sidaas, markaad fuusho mowjadda saxda ah waxaad kuheli kartaa shilimaad baarka maxaliga ah, oo ay la socdaan badmaaxiinta deegaanka.
Waayo,: surfers sare.
Mowjad: o.50 ilaa 2.7 m.
4. Meelaha Ugu Badan Ee Epic Surf Ee Yurub: Klitmoller, Denmark
Doomaha kalluumaysiga, surwaal, iyo xeebta bacaadka ah ee kulmaya badda waqooyi ee sii kordheysa ayaa ah goobta aad ku arki doontid Klitmoller. Jirkan iyo xaaladaha cimilada waa waxa kasbaday magaalada yar ee Klitmoller magaca “Cold Hawaii”.
Dusha sare ee hawada, Klitmoller waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee loogu talagalay dabaylaha duufaanka ee Waqooyiga Yurub. Sidaas, waxaad ku wareejin kartaa hirarka mowjadaha sanadka oo dhan. Waxyaabaha kale ee cajiibka ah ee ku saabsan Klitmoller waa u dhawaanshahaaga Thy park qaranka oo ay matxafyada, halkaas oo aad ku dhiirrigelin karto sheekooyinka Viking, ka hor qabashada mawjadda saxda ah.
Goorma: sannadka oo dhan.
maxaad: xaaladaha cimilada oo qumman, dhammaan badmaaxiinta, sanadka oo dhan.
Hamburg ilaa Copenhagen Tareen
Zurich ilaa Hamburg Tareen Tareen ah
Rotterdam ilaa Hamburg Tareen Tareen ah
Xeebaha ku yaal Biarritz waa qaar ka mid ah xeebaha ugu riyooyinka wanaagsan Faransiiska, iska daa Yurub. Sidaa darteed, layaab ma leh in Biarritz ay tahay meel halyeeyo caan ku ah oo looga dabaasho Yurub. Mawjadda La Graviere waxay soo jiidanaysaa khubaro ka socota adduunka oo idil illaa Atlantique Pyrenee ee raadinta ka dib mawjadda saxda ah.
Halka Hossegor uu inta badan soo jiito martida fasaxa ku teedsan badda, bulshada dusha sare ee halkan waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican Yurub. Sidaas, waxaad kaheli kartaa aragti ku saabsan mowjadda saxda ah ee kafeega iyo wiishka ee ka imanaya kuwa ku lug leh france. Intaa waxaa dheer, Hossegor ayaa martigaliyay socdaalka sanadlaha ah ee WSL dhacdo.
Waayo,: surfers dhammaan heerarka iyo dhammaan noocyada looxyada.
maxaad: Nasashada xeebta ee adag.
Goorma: Dayrta ilaa gu'ga, laga bilaabo bartamihii Oktoobar magaaladu waa xiran tahay, iyo hirarku waxay u siman yihiin ilaa heerkulka epic la Grave. Sidaas, waad qorshayn kartaa safarkaaga meeshan cirifka ah ee cirifka ah, oo joog hudheellada ama safarka kiraysan ee xeebta agteeda.
Cabbirka hirarka: 0.5 si ay u 2.5 m.
6. Meelaha Ugu Badan Ee Epic Surf Ee Yurub: Jasiiradda Lewis, Scotland
Halka woqooyiga ka soo burqato la kulanto Atlantic, hirar kacsan iyo dabaylo kulul, abuuri meesha ugu xiisaha badan ugxanta ee Scotland. Jasiiradda Lewis ee ku taal isku-xidhka Atlantic Outer Heuteridean-ka waa mid ka mid ah kuwa ugu badan meelaha picturesque gudaha Scotland.
Sidaa darteed, Isle of Lewis waa janno duufaan ah, laakiin kaliya loogu talagalay kuwa ugu horumarsan. Mawjadaha kulul ma ahan kuwa bilowga ah ee wali halganka ugu jira inay dabbaalaan oo galaan soohdimaha iyo xuquuqda.
Goorma: dayrta iyo jiilaalka.
7. Scheveningen The Hague, Netherlands ayaa
Dabayl dabaysha, kitesurfing, ama xuquuqda duufaanka, Hague waa meel weyn oo loogu talagalay fasaxyada fasaxa, kaliya a safarka tareenka ka fog Amsterdam. In kasta oo ay u muuqan karto sidii cimilada oo kale oo aan soo dhawayn, laakiin loogu talagalay kuwa badda lagu tuuro, waxay abuurtaa xaalado qumman oo lagu raaco mowjadda saxda ah.
Waad qabsan kartaa barar midig oo dhan 11-kiiloomitir xeebta, gaar ahaan xeebta Scheveningen. halkan, waxaad ka heli doontaa surfer heerarka oo dhan ah iyo dukaamada meelaha ugu fiican ee lagu raaxeysto iyo qalabka.
Si aad u soo gabagabeyn, Hague waxaa lagu yaqaan doorka siyaasadeed ee adduunka, waa mid ka mid ah meelaha loo yaqaan 'epic overfighter' ee Yurub.
8. Meelaha Ugu Badan Ee Epic Surf Ee Yurub: San Sebastian, Spain
Xuduuda udhaxeysa Faransiiska iyo Spain, ee dalka Basque, San Sebastian waa magaalo xeebeed aad u cabsi badan, leh dhibco ficil ah. halkan, waxaad ka boodaysaa mawjadaha ilaa baararka tapas, ka dibna lagu nasto xeebta bacaadka ah ee mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Isbaanishka.
Cantabria waxay leedahay xoogaa xeebo cajiib ah iyo goobo duljoog ah, sida xeebta Zurriola, xeebta ugu dambeysa ee loo dalxiis tago ee San Sebastian. Waxay ku habboon tahay kuwa bilowga ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Si kastaba ha ahaatee, si aad uhesho aragtiyo wanaagsan, ka fiiri mowjadaha xeebta La Concha.
maxaad: dhaqdhaaqyada degdega ah ee gacanka furan.
Mowjad: duub fiican-agagaarka waqooyi-galbeed barar.
Goorma: Nofeembar ilaa Diseembar.
Watergate Bay waa meesha looga dalxiis tago UK, iyo boqolaal ka mid ah kuwa loo yaqaan 'surfers' ee ka qayb gala horyaalada qaran ee luuqadda Ingiriiska. Dabaylaha iyo duufaanta duufaanka ayaa halkan caan ku ah, kana dhigaysa Watergate Bay mid ka mid ah 10 inta badan meelaha loo dalxiis tago ee Yurub.
Sennen Cove oo ku taal Cornwell waa xeeb kale oo qurux badan iyo meel fuulista. Sennen Cove iyo Praa Sands waa goobo aad u wanaagsan oo lagu dalxiis tago oo leh xeebo yaab leh.
maxaad: dabaylaha iyo furfurnaantu waxay ku habboon yihiin badmaaxayaasha heerarka oo dhan.
10. Meelaha Ugu Badan Ee Epic Surf Ee Yurub: Sardinia, Italy
Jasiiradda quruxda badan ee Talyaaniga ee Sardinia ayaa xirta 10 inta badan meelaha loo yaqaan 'epic surf' ee ku yaal liiska Yurub, leh Badda Dhexe iyo xeebta bacaadka ah. halkan, waxaad qaadi kartaa hirar yar yar ama dhexdhexaad ah, ama hirar xoog leh oo qaybta galbeed ah. Waxaa intaa dheer, la 300 maalmood kaamil ah, Sardinia waa janno dul heehaabaya.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto inaad fuusho baraf daran, ka dib qorshee fasaxaaga dalxiis ee Sardinia, laga bilaabo Nofeembar illaa Janaayo. Costa Verde, Buggero oo ku taal San Nicolo, iyo Porto Ferro oo ku taal Alghero waa 3 of the beautiful and best beaches for surfing.
Goorma: Sebtember ilaa Nofeembar, ama Maarso ilaa Maajo.
Mowjad: 3-4 m.
at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan gacan ka geysano qorsheynta dalxiis dalxiis oo la yaab leh 10 inta badan meelaha loo dalxiis tago ee Yurub. Safarka tareenka ee taga meesha loo socdo iyo guri ku riyooday meel ka baxsan guriga waa habka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan ee safarka.
Ma dooneysaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "10 Meelaha Epic Surf ugu Badan Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fmost-epic-surf-destinations-europe%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
bestsurfingplaceseurope dabaasha surfcampseurope Surfing SurfingDestinations surfingholidayineurope wave